Paul Pogba Oo Ugu Dambayn Ka Sheekeeyay In Paul Scholes Iyo Ryan Giggs Ay Tababarka Laag Kula Dhici Jireen & Sababta Ka Dambaysay - Gool24.Net
Paul Pogba Oo Ugu Dambayn Ka Sheekeeyay In Paul Scholes Iyo Ryan Giggs Ay Tababarka Laag Kula Dhici Jireen & Sababta Ka Dambaysay
Khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa ka sheekeeyay inay tababarka laag kula dhici jireen halyeeyada kooxdaas ee Paul Scholes iyo Ryan Giggs iyo sidii ay u caawisay talo uu ka helay Patrice Evra.
Pogba ayay dhawaan is arkeen Evra oo ay hore uga soo wada tirsanaayeen Man United, Juventus iyo xulka qaranka France iyagoo ka sheekaystay noloshii Pogba ee maalmihiisii ugu horreeyay kooxda koowaad ee United.
Pogba ayaa akaademiga Man United kasoo baxay isaga oo da’yar ah balse waxa uu kaliya ku guuleystay inuu saddex kulan oo Premier League ah ciyaaro tan iyo markii uu iskaga tagayay Old Trafford sanadkii 2012.
Shaki la’aan hibada Pogba ayaa ahayd mid meesha taalay balse iyadoo ay ku hareeraysnaayeen Scholes, Giggs iyo xiddigo kale oo dufcadii akaademiga United ee 1992-gii ah (Class of 92) ayuu awoodi waayay inuu saamayn yeesho.
Haddaba, Pogba oo haatan dib uga sheekaynaya arrinta ah in Scholes iyo Giggs ay tababarka ku soo dhibeen lana sheekaysanaya Evra ayaa sheegay in taladii Evra ee ahayd inuu u istaago ragga laaga la dhacaya ay caawisay.
“Waxaan ahaa mid aad u ixtiraamayay qofkasta, adiga (Evra), Rio, Giggs, qofkasta” ayuu Pogba u sheegay il-wareedka The Player’s Tribune.
“Sidaas darteed waad xasuusataa markii Giggs iyo Scholesy ay tababar kasta i laagi jireen oo aan anigu kaliya eegi jiray oo aan istaagi jiray oonan waxba odhan jirin balse ixtiraam kaliya”
“Sidaas darteed adiga ayaa ii sheegay ‘Paul, haddii aad u ogolaato inay ku laagaan waxaad noqon doontaa doqon, waxay ku bilaabantaa doqonka kooxda sidaas darteed waxa kuu wanaagsan inaad kacdo oo aad hab fikirkaaga bedesho”